पोखरा महानगरले निम्त्यायो रामघाटमा विवादः बन्द गर्न ठेकेदारहरुको माग – Tandav News
कुन घाट कस्को ?, दैनिक राजस्व कति उठाउँछ महानगर ?
ताण्डव न्यूज द्वारा २०७८ कार्तिक २९ गते सोमबार १८:१८ मा प्रकाशित
कास्कीको विभिन्न घाटहरुको ठेक्का पाएको ठेकेदार समुहले पोखरा महानगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको रामघाटलाई बन्द गर्न माग गरेको छ ।
विगत १ महिनादेखि राजस्व परामर्श समितिको निर्णयमा सञ्चालन भैरहेको रामघाटलाई बन्द गर्न माग गर्दै आईतबार हरि बहादुर थापाको नेतृत्वमा सामुहिक हस्ताक्षरित मागपत्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई बुझाएका हुन् ।
महानगरमा पेश भएको पत्रमा लेखिएको छ, ‘हामी ठेकेदार जुन विषयमा नगरपालिकाद्वारा ठेक्का प्रकाशित पत्र प्राप्त गरि लालटिन बजार, गजरे घाट, दश खेत, गुस्टेघाट, भेडीफारम, ओखलढुँगा, चमेराघाट, र अन्य घाटहरु हामीले नगरपालिकाद्वारा र राजस्व कार्यालयद्वारा प्राप्त गर्यौ र अहिले जुन रामघाटमा विना ठेक्काद्वारा काम चालु रहेको छ भन्ने कुरा र दशै, तिहारको लागि मजदुरका लागि भनेर खोलिएको भन्दै फेरी थप सञ्चालन गरेको हुनाले यो नियम विपरित गएको हुनाले हामी सम्पूर्ण ठेकेदारहरुले रामघाट नियम पूर्ण सञ्चालन गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौ ।’
कास्कीको अन्य घाटहरु टेण्डर प्रक्रियाबाटै सञ्चालनमा छन् भने बन्द रहेको रामघाट पछिल्लो समय महानगरपालिकाले नै सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस अघि उक्त घाटको टेण्डर रकम ८ करोड बढि थियो । अहिले भने विना टेण्डर राजस्व परामर्श समितिको असोज १० गते बसेको बैठकको निर्णयबाट महानगरले नै सञ्चालन गरिरहेको छ ।
१ महिना सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपनि बाँकी एक महिना ९मंसिर ११० सम्मको लागि सो समितिले म्याद थप गरेको छ । सो घाटको नदीजन्य सामाग्री विक्रि शुल्क संकलन गर्नको लागि महानगरपालिकाले शोभाकान्त पोख्रेल (सहायक स्तर पाँचौ), सुर्यमोहन पौडेल (सहायक स्तर पाँचौ), बलराम आचार्य ९नगर प्रहरी० र हरि प्रसाद बराल (नगर प्रहरी) गरि ४ जना कर्मचारी खटाएको छ ।
यता अन्य घाट सञ्चालनको जिम्मा पाएको ठेकेदार समुह भने महानगरको सो कार्यप्रति रुष्ट रहदै आएको छ । ‘हामीले उठाए हप्ता महानगरले उठाए राजस्व, एक ठेकेदारले भने, ‘यस्तो पनि हुन्छ ?
कुन घाट कस्को ?
कास्कीको रामघाट बाहेक अन्य घाटहरु कम्तिमा २५ लाख देखि १ करोड ९२ लाख सम्म ठेकेदारहरुसँग महानगरपालिकाको सम्झौता भैसकेको छ ।
लालटिन बजारघाट दिपक गुरुङले १ करोड ९२ लाखमा ठेक्का पाएका थिए । यसैगरी गजुरेघाट १ करोड ४ लाखमा हरि बहादुर थापाले, दशखेत १ करोड ४१ लाखमा बिनम पुनले, गुस्टेघाट १ करोड १७ लाखमा गाेपी गुरुङले, भेडीफारम १ करोड २१ लाखमा गुमन गुरुङले, ओखलढुँगा र आशिष भण्डारीले, चमेराघाट १ करोड ८० लाखमा राहुल गुरुङले, ढावाघाट ७५ लाखमा नवराज केसीले, तुलसी ताराघाट २५ लाखमा विश्वास गुरुङले र द्वारगश्वेर घाट ८० लाखमा सचिन केसीले ठेक्का प्राप्त गरेसँगै नदीजन्य सामाग्री विक्रि वितरण गर्दै आएका छन् ।
पोखरा महानगरपालिका र ठेक्का पाएको आर्क डि आर्किटेक्चरल एण्ड ईन्जिनियरिङ सर्भिसेज प्रालि अन्तिम सम्झौता अनुसार रामघाटको मुल्य साढे ७ करोड थियो । २०७८ सालको जेठ मसान्त सम्म सञ्चालन गर्ने पाउने गरि भएको साढे ७ महिनाको सम्झौता गरिएपनि नदीजन्य सामाग्री उत्खनन र विक्रि वितरण भने सो कम्पनीले लकडाउनका कारण साढे ५ महिना गर्यो । सो सम्झौता अनुसार महानगरको राजस्वमा प्रति टिप ३ हजार ३ सय र ३ हजार मजदुरलाई गरि कुल ६ हजार ३ सय रुपैयामा प्रति टिप वालुवा विक्रि हुन्थ्यो ।
सम्झौता सकिएपछि बन्द रहेको रामघाट पर्व विशेष मजदुरहरुका लािग राजस्व परामर्श समितिको निर्णयमा असोज ११ देखि महानगर आफै सञ्चालन गरेको छ । महानगरले १ हजार २ सय कम गरेर कुल २ हजार १ सय मात्रै (प्रति घनमिटर ७ सय १० रुपैया) राजस्व लिदै आएको छ । भने प्रति टिप मजदुरले ३ हजार ५ सय पाएका छन् ।
पहिलेको तुलनामा अहिले ६ सय रुपैया घटाएर मिनि टिप्परले वालुवा खरिद गर्ने गर्छ । सोही सहुलियत दरका कारण रामघाटमा वालुवाबहाक साधनहरुको चहलपहल बढेको छ । ‘पहिला एक टिपको ३ हजार पाउँथेम अहिले ५ सय बढाए ३५ सय पाउँछौ ।’ एक मजदुरले भने ।
दैनिक राजस्व कति उठाउँछ महानगर ?
यसअघि पोखरा महानगरले रामघाट साढे ७ करोडमा जिम्मा दिएको थियो । करिब ७ महिनाका लागि भएको सम्झौता अनुसार सो कम्पनीले प्रति महिना १ करोड संकलन गर्नुपथ्र्यो तर महानगर आफैले जिम्मा लिदा डेढ महिनामा जम्मा साढे १४ लाख मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ । यसरी हेर्दा महानगरले साढे ७ महिनामा ८ करोड संकलन गर्न नसक्ने प्रष्ट छ ।
महानगरले शान्तिवन क्षेत्रमा असोज ११ गतेबाट हिजो २८ गतेसम्म करिब साढे १४ लाख रुपैया राजस्व संकलन गरेको राजस्व शाखा राजस्व अधिकृत कृष्ण तिवारीले बताए । उनले आईतबारदेखि पोखरा महानगरापालिका ११ क्षेत्रमा पनि नदीजन्य सामाग्री विक्री थालेको बताए । उनका अनुसार पहिलो दिन सो क्षेत्रबाट करिब ७० हजार राजस्व संकलन भएको छ ।
होटल संघ र आवास संघले पोउवाको उपाध्यक्ष पदका उम्मेद्धवार पोखरेललाई सघाउने